जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नै फरार भएपछि….::Leading Nepal News
जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नै फरार भएपछि….
वैशाख २६, झापा । भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने प्रक्रियामा मुछिएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भागेपछि वडाको काम प्रभावित भएको छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा रविन भट्टराईले लेखेका छन् । अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेसँगै कचनकवल–२ का वडाध्यक्ष मुखबहादुर भट्टराई, वडा सदस्य धनबहादुर गुरुङ र वडा सचिव हरिप्रसाद गौतम एकै दिन फरार भए। यसबाट दैनिक काम लिएर वडा कार्यालय पुग्ने सेवाग्राहीमा परेको छ।
वडा कार्यालयमा अध्यक्ष, सदस्य र सचिव नहुँदा सेवाग्राहीले सिफारिस, जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, योजना सिफारिस, नागरिकता सिफारिसलगायत वडाबाट हुने काम लिन सास्ती भोग्नुपरेको वडासदस्य चन्द्रशंकर अधिकारीले बताए। ‘वडा कार्यालयबाट धेरै काम हुन्छ, त्यसैले नागरिकको चाप त हुन्छ नै, वडाध्यक्ष, सदस्य र सचिव सबै भूमिगत भए। काममा समस्या छ,’ अधिकारीले भने। वडा कार्यालयमा हाल आफूलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिए पनि आफूले वडा कार्यालयबाट हुने कुराको धेरै अध्ययन गर्न बाँकी रहेको र वडा सचिवसमेत कार्यालयमा नहुँदा समस्या पर्ने गरेको उनले बताए। नजिकै रहेको ३ नम्बर वडाका सचिव लक्ष्मण तामाङलाई २ नम्बर वडाको पनि काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
कचनकवल गाउँपालिकाले सोमबारदेखि तामाङलाई दुईवटै वडाको जिम्मेवारी दिएपछि केही घन्टा मात्र २ नम्बर वडामा जाने र बाँकी समय ३ मै बस्न थालेका छन्। सेवाग्राही फाइल बोकेर अर्को वडा दौडनुपर्ने बाध्यता रहेको महिला सदस्य मनमाया चौहानले बताइन्। ‘१,२ घन्टा बस्नुहुन्छ, बाँकी समय ३ नम्बरमै रहने हुँदा सेवाग्राही यता र उता दौडनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भनिन्। वडामा एकजना कार्यालय सहयोगी मीना अधिकारी र कम्प्युटर अपरेटर रेसम तामाङ छन्।